Sida Looga Sameeyo Emailkaaga Suuqgeynta Mid Saaxiibtinimo | Martech Zone
"Sannad-sannadka, laga bilaabo Maarso 2011 illaa Maarso 2012, emaylku wuxuu ku furmayaa aaladaha mobilada koray 82.4 boqolkiiba," sida laga soo xigtay tirakoobka mobilada Return. Ka dhigitaanka qayb ka mid ah dadaalka suuqgeynta emaylkaaga mar dambe maahan ololeyaal emayl oo horumarsan; waa lama huraan.
Dhawaan, Delivra waxay daabacday Sida Loo Sameeyo Emailkaaga Suuqgeynta Mobilada Saaxiibtinimo, waa kheyraad bixiya isbeddellada wareega ee 2012, tirakoobka, iyo talooyinka ku saabsan sida loo diyaariyo suuqgeynta emailkaaga ee loogu talagalay dhagaystayaashaada socdaalka ah.
Wargeysku wuxuu ka hadlayaa saddex qaybood oo muhiim u ah guusha emaylka moobiilka iyo tabaha loo baahan yahay si loogu adeegsado istiraatiijiyad noocan oo kale ah.
Aaway dhagaystayaashaadu akhriska emailka?
Ma waxaad u abuureysaa waxyaabo akhristayaasha moobiilka?
Naqshadeynta emaylkaagu ma tahay mid saaxiibtinimo leh?
Jawaabta su'aalahan iyo si loo hubiyo in e-mayladaadu ay soo galayaan da'da guurguura, soo dejiso Sidee loo Sameeyaa Email-kaaga Suuq-geynta Mobilka ee saaxiibtinimo leh.
80% macaamiisha waxay ka helaan akhrinta emayllada suuqgeynta mobilka mobiladooda inay ka sahlan yihiin kombuyuutarka. Miyaad abuureysaa emayl ay dhagaystayaashaadu awood u leeyihiin inay si fudud ugu akhriyaan ugana jawaabaan aaladda moobaylkooda? Haddii kale, waxay u badan tahay in loo raro qashinka. Yaanay taasi dhicin!
Tags: delivraEmail MarketingSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaemaylka gacantaisbeddellada wareega
Lacagaha Moobaylka - Suuqa oo gacantaada ku jira
Khubarada Suuq geynta Inbund waxaad ka baran doontaa khadka tooska ah
Waad ku mahadsantahay daabacaadda tan. Kaliya waxaan maanta macmiil kala hadlaynay muhiimada mobilada iyo sida ay muhiimka u tahay in laga faa'iideysto inta ay kujirto qalooca koritaanka cajiibka ah!